MILA NAMANA IANAO – Blaogin'i Voniary
MILA NAMANA IANAO
Voafaoka ao anatin’io namana io ireo olona izay manohana, manoro hevitra, mananatra ary manampy anao. Mety ny iray tampo aminao, ny ray aman-dreninao, ny namanao akaiky, ny mpiray fikambanana na mpiara miasa izany. Tsy fidiny ho an’ireo singan’irery ny miatrika ny fiainana amin’ny heriny manokana. Koa aza tsinontsiniavina ny tombony azonao amin’ny fisian’ireo olona ireo.
IREO OLONA AKAIKY ANAO
Dada sy Neny, ny iray tampo ary na vady aman-janaka no olona akaiky anao indrindra ka miaina ny hafalianao sy mifampizara ny fijalianao. Ireo koa matetika no afaka manome vahaolana voalohany raha misy mahatery anao. Ambarao azy ireo araka izay mety ny olana mianjady aminao fa azo antoka fa tsy hanary anao izy ireo. Eo koa ireo namana sy tapaka manohana hatrany ary mifampizara ny manta sy ny masaka aminao. Tandra vadin-koditry ny fiainana manko ny olana ka tsy maintsy misy ireny na iholan-kivato na iholan-kihazo. Tandremo ary ianao sao manao toy ilay olona dobo an-drano nangataka famonjena tamin’Andriamanitra. Nisy lakana nandalo ka nanolo-tànana azy fa tsy nanaiky izy satria Andriamanitra hono no andrasany. Nandalo koa ny sambo lehibe, vonona hanampy azy fa nandà ihany ranamana. Vita izay dia nisy angidim-by, efa nandrotsaka ilay tohatra kely ampiakarana azy fa nijanona tao anaty rano ihany ny anao lahy. Izy anefa tsy mitsahatra mangata-bonjy sy mitalaho fanampiana avy amin’ny Avo. Niteny Andriamanitra nony farany hoe : « Efa olona telo izay no nirahiko hamonjy anao fa ianao no nandà. Ka tsy hitako izay atao anao » Namaly ranamana hoe : « Ka olombelona ihany ireny fa tsy noheveriko hoe tena fanampiana avy aminao » Nilaza àry Andriamanitra fa ny samy olombelona dia tiany mba hifanohana, fa izany indrindra no sitrapony. Tapitra moa ny herin’ity rangahy, tsy nahatohitra ny arerahana izy ka nalentiky ny rano. Koa aoka ianao tsy hanao tsinontsinona ireo akaiky satria ireo no tena miarak’ory sy miara-paly aminao.
EO AMIN’NY SEHATRA MIVELATRA KOKOA
Nisy fotoana aho nilaza tamin’ny Ray aman-dreniko ny faniriako hanangana orinasa. Nanakana ahy avy hatrany izy ireo satria sarotra izany sady nanoro hevitra ny idirako mpiasam-panjakana satria io no azo antoka. Kivy aho tamin’izay. Nandeha teny ihany ny fotoana fa tsy foana ilay fikasako. Ny manodidina ahy sy ny zavatra tsikaritro amin’ny fiainana andavanandro anefa toa manamarina izay nolazain’ny Ray aman-dreniko avokoa, hany ka nikorontana be ihany ny saiko. Indray andro anefa aho raha sendra nijerijery tao amin’ny Facebook aho dia nisy petadrindrina iray nanaitra ahy mikasika ny « Rendez-vous des Entrepreneurs ». Tsy nisalasala aho nandeha nanatrika ilay hetsika. Akory ny hafaliako nony tonga tany fa nihaona tamin’ny tanora maro mitovy hevitra amiko aho. Tsy vitan’izay fa afaka nihaino fijoroana vavolombelona nataon’ireo zoky efa ao anatin’ny sehatry ny fandraharahana sy nandray torohevitra avy amin’izy ireo. Tena nanampy ahy tokoa iny fotoana iny satria vao mainka nampiroborobo ilay fiantsoana ho amin’ny fandraharahana sy nanampy ahy hamolavola tetikady matotra. Roa taona taty aoriana, nanangana ny orinasako aho, fa iny moa tantara hafa indray, mbola ifampizarako aminao eo ihany. Izany rehetra izany dia manambara fa misy sehatra mivelatra kokoa afaka izaranao ny nofinofinao, ny sedra lalovanao, ny hafalianao , ny firehan-kevitra na ny zavatra tianao. Any am-piangonana, ny fikambanana, ny firohotana na ny antoko dia ahitanao olona mety ho « namana » avokoa.
Mila namana ianao amin’izay rehetra ataonao indrindra amin’izao fotoan-tsarotra izao. Mahaiza anefa mifidy namana mba hitarika anao amin’ny tsara sy hampivoatra anao. Ho fanampin’izany, mila manohana ny tenanao avy amin’ny herim-ponao sy ny herin-tsainao koa ianao. Izany no ho hitantsika amin’ny manaraka. Mandrapihaona indray ô !
développement personnel gasy, empowerment gasy, fahaiza-miaina, fandrosoana, hanangana orinasa, mpandresy ianao
SERASERA.ORG : MANANDRATRA NY TENY MALAGASY AMIN’NY ATERINETO